PVC nsu-nsu nsu | kachasị mma maka gị - bestpvcfence.com
Webcome na Zhejiang Jovyea Plastic Co.Ltd.
Ogige mmanya vinyl
Ụdị ụlọ mmanya vinyl
Oghere ngwa ngwa
Ihe Nleba Zoro ezo nke Ọnụ Ụzọ Ntugharị Agbanweaka
Gịnị mere mgbidi Vinyl ji bụrụ nke mara mma rue ugbu a?
Gini mere anyi ji enwe mmasị n'anya Vinyl Fencing Ma kwesiri ibu
Ngọzi 5 nke ntọala Vinyl Fence
Ihe Ise Ise Ị Na-ahụ n'Anya na PVC Nsu.
5 Eziokwu Dị Mkpa I Kwesịrị Ịmara Banyere Vinyl Nzuzo Nzuzo.
Kedu ka ụlọ mmanya mmanya ga-esi dịrị n'ọdịnihu.
ise Uru nke oghere ọnụ ụzọ Pvc na otú ị nwere ike isi mee ya n'ụzọ zuru ezu.
Nabata Zhejiang Jovyea Plastic Co.Ltd, ebe a ị nwere ike ịzụta ụdị pVC nsu, PVC decking, PVC mgbidi mgbakwunye wdg, anyị ga-enye gị ọrụ kacha mma. Ọ bụrụ na ị bụ onye nkwekọrịta, onye ọrụ oru ngo, ụlọ ọrụ ụlọ ahịa ma ọ bụ onye na-azụ ya, ọ nwere ike ịdị gị mkpa inwe usoro ihe omume zuru ezu iji mezuo ihe ndị ọzọ ị chọrọ mgbe ị zụtara ngwaahịa anyị. Naanị ị chọrọ ide email sales@bestpvcfence.com ma ọ bụ kpọọ anyị kpọmkwem na 05722269152 ka ịgakwuru. Ndị ọkachamara na ndị ọkachamara na-arụ ọrụ ga-enye ndụmọdụ kacha mma dabere na ọrụ gị.
Jovyea bụ onye na-emepụta ọkachamara na-eche banyere imewe, mmepe na mmepụta nke profaịlụ nsu PVC. Ihe niile anyị na-eme na-agbaso ụkpụrụ omume zuru oke n'ụwa ma nwee ekele dị ukwuu na ndị ahịa anyị. Ị nwere UL94, akụkọ nyocha nke otu nyocha maka ịchọta ya.Dịnye mpaghara 43000 square mita, anyị nwere ndị ọrụ 400, ikike ikike mmepụta kwa ụbọchị bụ 30,000 tọn. Ụlọ ọrụ ahụ ejirila otu nkwekọrịta Germany nke KraussMaffei na ígwè ọrụ dị elu maka ichepụta profaịlụ PVC. Ụlọ ọrụ anyị kwadebere nke ọma na njikwa mma nke kachasị mma n'oge niile nke mmepụta nyere anyị aka ịkwado afọ ojuju ndị ahịa. Site na nzụlite nkà na ụzụ, ụlọ ọrụ ahụ etinyela aka na nchịkwa, ahịa na nkà nke ịpụta. Ihe kachasị anyị ahịa bụ America, Canada, Europe, Australia, New Zealand wdg. Anyị na-achọ ime ka nlele PVC kachasị mma na mpaghara aN'anyị na-atụ anya ka ị bụrụ onye ọrụ azụmahịa gị dị egwu n'ọdịnihu dị nso. anyị ụlọ ọrụ ma ọ bụ kpọtụrụ anyị maka imekọ ihe ọnụ! GỤKWUO
Anyị na-enye ndị ahịa anyị gburugburu ụwa ka ha nọgide na-enwe ezigbo nkwurịta okwu na nkwado ngwaahịa.
Anyị nwere ike ịnye ezigbo ọrụ a pụrụ ịdabere na ya, na-akwụghachi ụgwọ ma na-akwụ ụgwọ na nkwado teknụzụ, iji gboo mkpa nke ndị ọrụ anyị.
WPYOU bụ ọkachamara egwuregwu maka hazie WordPress mkpokọta, anyị nwere ọtụtụ ahụmahụ na ebe nrụọrụ weebụ azụmahịa.
Ngwaahịa anyị na-agụnye ihe dị iche iche nke ngwaahịa na-adịgide adịgide. Enwere ike iji usoro dị iche iche dị iche iche nke nhicha iji rụọ ọrụ nke kachasị mma maka nsu gị.
Ihe m chọrọ ka onye ọ bụla mara maka ntancha.
Mgbacha ogige Ọ bụghị nanị na ọ dị mfe iji tinye ya na vinyl fences, Otú ọ dị, ha na-ejikọ ọnụ n'ụzọ dị mfe iji saa ma jide n'aka. dị ka ihe niile a na-eme, mmanya vinyl na-adị ọcha na-achọ ka e mee ka ọ dị ọcha ma lekọta ya ka ọ nọgide na-agba mbọ na ya. GỤKWUO
Ihe ọhụrụ maka PVC / vinyl nsu-Zhejiang Jovyea Plastic Profile Co.Ltd
Ọ bara uru ịlele ụdị ngwaahịa ọhụrụ anyị nke na aha ahụ bụ "FENCE na-ewepu". Na nzube iji gboo mkpa nke ndị ahịa, Zhejiang Jovyea Plastic Profile Co.Ltd gosipụtara ngwá ahịa a. k'ayi nyocha ihe ndi ozo ... GỤKWUO
Igwe ndị dị elu na-emepụta mmepụta na oke mmiri
Zhejiang Jovyea Plastic Co.Ltd ejiriwo ngwugwu zuru ezu nke Germany jikọtara KraussMaffei na ígwè ọrụ dị elu maka imepụta profaịlụ percent. Anyị mara mma-na-arụ ọrụ ... GỤKWUO
efere anụ ọhịa
ụdị mgbidi vinyl
Tinye.: NO.163-1 HUAN CHENG EAST ROAD, SHUANGLIN STOWN, NUN XUN district, HUZHOU obodo, obodo ZHEJIANG, CHINA.
Copyright © 2018 bestpvcfence.com Ikike niile echekwabara.